ခရီးသွားရင်း အထာကျကျ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဘာတွေ လိုမလဲ? - Myanmar Textile & Garment Directory
ခရီးသွားရင်း အထာကျကျ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဘာတွေ လိုမလဲ?
နွေရာသီ ခရီးသွားရာသီ ရောက်တော့မှာ ဆိုတော့ ခရီးသွားဖို့ လာဖို့ လုံးပန်းရမယ့် အချိန်ရောက်တော့မှာပါ။ တစ်နှစ်ကို တစ်ခေါက်လောက်တော့
စိတ်အပန်းပြေဖို့အတွက် ခရီးသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခရီးသွားရင်း ဓာတ်ဖမ်းချင်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် ဘာတွေ ယူသွားရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
ခရီးသွားလျှင်​ ပုဝါတစ်​ထည်​ပါ​အောင်​ယူပါ။ ပုဝါ​​လေးနဲ့ postအမျိူးမျိူး​ပေးလို့ရတယ်​။ ဆံပင် မရှုပ်အောင် ပုဝါလေးကို ခေါင်းမှာစီးပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်မလား။ လေထဲမှာ တလွင့်လွင့် ထား အလန်း post လေးတွေ ပေးမလား။ အမျိုးမျိုး အသုံးဝင်တဲ့အတွက်ပါ။
Read:သင်္ကြန်ကာလနီးလာပြီဖြစ်၍ ရန်ကုန်မြို့ ဈေးများ၌ မြန်မာဝတ်စုံများ ရောင်းအားတက်
မျက်​မှန်​မတပ်​ချင်​လဲအင်္ကျီမှာချိတ်​ထား၊ ခေါင်း​ပေါ်တင်​ထား မိုက်​တယ်​။ လူက ပင်ပန်းပြီး မလှတော့ဘူးလို့ ထင်လာရင် မျက်မှန်လေး ကောက်တပ်ပြီး ပြုံးပြုံးလေးသာ နေလိုက်မှာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အရမ်းလှနေမှာ။
​(၃) ဗမာဝတ်​စုံ​လေး​တွေဆိုလဲ​ ပေါ့​ပေါ့ပါးပါး​လေး​တွေ ယူပါ(ဥပမာ-ချည်​ဝမ်းဆက်​)
​လေးလံ​နေတဲ့ ချိတ်​ထမိန်​​တွေမယူပါနဲ့။ နွေရာသီ ခရီးသွားတယ်ဆိုမှတော့ ချိတ်ထမီကြီးတွေ ဝမ်းဆက်အထူကြီးတွေနဲ့ဆို ပူအိုက်နေမှာနော်။
​(၄) ပေါ့ပါးတဲ့ ဖိနပ်​ကို စီးပါ။
ဖိနပ်အတွက်ကိုတော့ ရှုးလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ် ဖိနပ်ပါးပါး လှလှလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်ကို လိုလိုပိုပို ယူသွားချင်ရင်လဲ ရပါတယ်။ ခြေထောက်နာမှာစိုးလို့ မစီးရင်တောင် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခဏလေး ကောက်စီးထားလို့ ရတာပေါ့။
(၅) အဝတ်အစားကို ဒီလိုတွေ ယူပါ။
ရှပ်​အဖြူ​လေးနဲ့ဂျင်းတစ်​ထည်​ပါ​အောင်​ယူပါ။ အဲ့လိုဖက်ရှင်လေးနဲ့ဆို ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် စမတ်ကျနေမှာ မို့ပါ။ နောက်ပြီး ဂါဝန်လှလှလေးတွေ ယူပါ။ ဂါဝန်စ တလွင့်လွင့်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တာက သင့်ကို အမိုက်စား ဖြစ်စေမှာပါ။
(၆)power bank ​ဆောင်​ပါ။
ဒီအချက်က အ​ရေးကြီးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်မယ်ဆိုမှ ဖုန်းအားကုန်နေလို့ မဖြစ်ဖူးလေ။ ဒါကြောင့် Power Bank ဆောင်ပါ။​
(၇) အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ ယူသွားပါ။
အလှပြင်​ပစ္စည်းအ​နေနဲ့တော့ မိတ်​ကပ်​ရယ်​ မျက်​ခုံး​မွှေးဆွဲတံ​လေးရယ် ​နူတ်​ခမ်းနီ​တစ်​ဗူးရယ် ပါရင်​ပြည့်​စုံပါပြီ။ တခြား Skin Care ပစ္စည်းတွေလဲ ယူချင်ယူသွားလို့ ရပါတယ်နော်။
(၈) ရှူခင်း အသား​ပေး post များများ ရိုက်​ပါ
ဘယ်အချိန် ပြန်ကြည့်ကြည့် ကိုယ်​​ရောက်​ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်တရလေး ရသွားအောင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် လူမပါရင်နေ ရှူခင်းပုံလေးတွေ ရိုက်ပါ။ လူပုံပါတော့ ပိုလှတာပေါ့။
အ​ရေးကြီးဆုံးတစ်​ခုက​တော့ စိတ်​ရှည်​ရှည်​နဲ့​ ရောက်​​လေရာ မငြိုမငြင်​ ဓာတ်​ဖမ်း​ပေးနိုင်​​သော သူငယ်​ချင်း ဒါမှမဟုတ်​ တခြားတစ်​​ယောက်​​ယောက်​​ပေါ့​။ အဲ့လိုလူပါမှသာ ခရီးသွားပါ။ အဲ့ဒါမှ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရမှာမို့ပါ။
Source: Thin Zar Soe